Ise nke kasị mma n'akpa uwe-sized smartphones - News Ọchịchị
Ise nke kasị mma n'akpa uwe-sized smartphones
Isiokwu a na-akpọ “Ise nke kasị mma n'akpa uwe-sized smartphones” e dere site Samuel Gibbs, maka theguardian.com on Tuesday 17 November 2015 07.00 UTC
Afọ a kemgbe ndị kasị mma maka smartphones, na ihe bara uru atụmatụ, mma aghụghọ na ọtụtụ mma software. Ma ọ nakwa kemgbe afọ nke abụrụwo top ahụmahụ na-adịghị na-eri top dollar na ezi smartphones adịghị ga-enwe oke meziri.
A bụ ihe a ngwa ngwa anya ise nke kasị mma smartphones dị na-agaghị gbatịa aka gị.
Sony Xperia Z5 kọmpat
The Sony Xperia Z5 kọmpat si 23-megapixel igwefoto bụ Sony ji mma ma. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ahịa: £ 450
Sony si flagship obere ekwentị nwere a 4.6in ihuenyo na a kọmpat ikpe na-eme ka ọ kasị ike nta smartphone ugbu a. A ngwa ngwa na ezi akara mkpisiaka nyocha odịbe n'okpuru ike bọtịnụ na aka nri n'akụkụ nke ekwentị, ya mere ọ dịghị mkpa itinye gị aka na a n'ụlọ button Ị kpọghee ekwt ngwaọrụ gị.
Ọhụrụ 23-megapixel igwefoto bụ Sony ji mma ma, na achọghị ịzụ otu nke kasị mma dị. Ọ na-ewe microSD kaadị maka agbakwunye mmezi nchekwa na ekwentị waterproof ka ogbu nke 1.5m maka 30 nkeji, pụtara a njem ala na otú bụghị ọgwụgwụ nke ụwa.
Ma, ọ bụ ya ụbọchị atọ ndụ batrị ahụ bụ nke na-egbu mma. Nke a bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ na-adịgide adịgide elu-ọgwụgwụ smartphone ugbu a.
Mkpebi: a dị ike, waterproof smartphone na-ewe ụbọchị atọ n'etiti ebubo
Sony Xperia Z5 kọmpat nyochaa: achọghị ịzụ ndị kasị mma nta smartphone
Mkpa, ìhè na ngwa ngwa: Samsung si Galaxy S6. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ahịa: £ 375
The Galaxy S6 bụ Samsung mbụ adịchaghị-mmetụta flagship ama na ihe niile na-metal na iko ahu, na a nnukwu nzọụkwụ elu na imewe pụtara na ọ now ọkụ mpi.
Ọ bụ ndị kasị enwe mmetụta ama ugbu a, zipping n'etiti ngwa na-enwusi site egwuregwu. Ọ nwere oké 16-megapixel igwefoto na bụ n'etiti ndị kasị mma si n'ebe, a kediegwu 5.1in 2K ihuenyo, na ọ bụ thinner na Mkpa ọkụ karịa ya ndị asọmpi.
A mkpisiaka ihe mmetụta n'okpuru home button unlocks na ekwentị na ike nyochaa ịkwụ ụgwọ. Ọ na-na-nwetara wireless Nchaji na-ezuru batrị ịhụ gị site a ụbọchị.
Mkpebi: ndị kasị mmetụta smartphone na dị nnọọ zips tinyere
Samsung Galaxy S6 nyochaa: iPhone egbu egbu
Processor 70% ọsọ ọsọ, ọhụrụ mkpịsị aka ebipụta nyocha - ma ogbenye ndụ batrị na-ahapụ ndị Apple iPhone 6S ala. Foto: Kiichiro Sato / AP
Ahịa: £ 539
The iPhone 6S bụ ọhụrụ 4.7in nlereanya site Apple, na otu nke kasị mma nta smartphones dị. Ọ bụ nnukwu n'ire mma bụ a mgbali mwute ihuenyo, nke na-enye ohere ọhụrụ Mmegharị ahụ na a 12-megapixel igwefoto na ike weghara Live Photos - ka Snaps jikọtara na a obere video ogbugba n'otu oge.
The metal ahu ugbu a mere nke a ike aluminum na ebelata scratches. Ọ processor bụ 70% ngwa ngwa karịa afọ gara aga. Apple ọhụrụ Touch ID akara mkpisiaka nyocha bụ fọrọ nke nta ozugbo, mgbe ya ọhụrụ Taptic Engine amị a oké staccato vibrating nzaghachi.
Ọ bụ nnukwu downside bụ a batrị na agaghị adịru a ụbọchị, pụtara na ị ga-eleghị anya nwere na-ana ya n'oge ehihie na n'otu ntabi anya.
Mkpebi: a oké obere ekwentị mebiri na ogbenye ndụ batrị
iPhone 6s nyochaa: a dị nnọọ mma ekwentị mebiri na ihe efu ndụ batrị
Ọ dịghị bloat na Nexus 5X. Foto: Justin Sullivan / Getty Images
Ahịa: £ 339
Google si ọhụrụ ndị na-abụghị phablet flagship, Nexus 5X, bụ nọchiri na-ewu ewu Nexus 5 si 2013.
Ọ nwere ezi 5.2in ihuenyo, bụ mkpa na ìhè ma bụ otu n'ime ndị mbụ smartphones na-agba ọsọ ọhụrụ version nke Android 6.0 Marshmallow. Ekwentị, mere site LG maka Google, -agba Android otú search ibu n'obi ya, -enweghị bloatware na ga-software mmelite tupu ihe ọ bụla ọzọ.
A ngwa ngwa na ezi mkpisiaka ihe mmetụta na azụ dabara ndammana n'okpuru gị ndeksi mkpịsị aka maka akpọchi ekwentị gị na authenticating ịkwụ ụgwọ. Ọ na-nwere a USB ụdị-C n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke pụtara na cable nwere ike plugged na nke ọ bụla elu na-ana. Batrị na-anọ banyere otu ụbọchị, ma ọ bụghị ihe ndị ọzọ.
The igwefoto bụ otu n'ime ndị kasị mma na ahịa na dị mfe iji na-jidere oké foto.
Mkpebi: ngwa ngwa, ìhè na bloat-free, ụzọ Google zubere ka ọ
Atọ oge kechioma ... Motorola si ọhụrụ Moto G. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ahịa: £ 145
Motorola atọ-emana Moto G bụ kasị ukwuu ma, na bụ ihe kasị mma niile-gburugburu smartphone maka n'okpuru £ 200.
Ọ na-agba Android enweghị mgbanwe, bụ snappier karịa iwu na-ọkọkpọhi isi nri. Batrị na-anọ a ụbọchị ọma, ọzọ na ìhè ojiji, na ọ na-ele ezi n'agbanyeghị na otú ahụ oké na customizable plastic Akwadoo.
The Moto G bụ waterproof ka IP67 ụkpụrụ ma ọ bụ 1m mmiri maka 30 nkeji, nke pụtara na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị na dobe ya na saa ma ọ bụ ijide gị na na mmiri.
The igwefoto bụ ike nke na akada n'elu-nkezi gbaa ma e nwere ihe a microSD kaadị oghere maka agbakwunye ọzọ ebe nchekwa ma ọ bụrụ na 8 ma ọ bụ 16GB wuru na-ezughị.
Mkpebi: ndị kasị mma itule nke na-eri na-enweta dị
Motorola Moto G (3Rd Gen) nyochaa: ndị kasị mma mmefu ego smartphone dị nnọọ wee mma
Mobile technology slogs ya na agha nke mma nsuso
35213	1 Apụl, Nkeji edemede, Mgbakọ, Google, Internet, iPhone 6s, mobile igwe, Motorola, Nyocha, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphones, Sony, Technology, telecoms, Gbalịrị na-anwale
← New ama batrị nwere ike na-ana na- 48% na nkeji ise Ka mmanya na n'ezie ime ka ị ka mma na bed? →